Malunga nathi -Hangzhou Mingjue Technology Co., Ltd.
I-Hangzhou Mingjue Technology Co, Ltd.
I-Hangzhou Mingjue Technology Co, Ltd.yinkampani yokudibanisa kunye neyorhwebo eyakhiwe ngo-2016. Sisebenza kunye nabavelisi abathathu abaphezulu ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kwihlabathi. Ukusukela ukuba inkampani yamiselwa, sisebenze nzima ukuba ibe yinkokeli kwimveliso ye-laser, nokukrola nokumakisha. Singabantu abatsha. Singabasombululi beengxaki. Sizimisele ukuyila nokubonelela ngeenkqubo ezikumgangatho ophezulu we-laser kwihlabathi.
I-Hangzhou Mingjue Technology CO., LTD igxile kwi-R & D, imveliso kunye nentengiso ye-CO2 laser, nokukrola umatshini wokusika, umatshini we-galvanometer laser, umatshini wokusika wefayibha kunye nomatshini wokumakisha we-laser. Umgca wemveliso ugubungela iimodeli ezingaphezu kwe-100.
Izicelo zibandakanya ushicilelo lwedijithali, amalaphu, iimpahla, izihlangu zesikhumba, amalaphu oshishino, ukubonelela, intengiso, ukushicilela iilebhile kunye nokupakisha, izinto zombane, ifanitshala, umhombiso, ukulungiswa kwesinyithi kunye namanye amashishini amaninzi. Inani leemveliso kunye neetekhnoloji zifumene amalungelo awodwa omenzi wechiza kunye namalungelo obunini besoftware, kwaye banemvume ye-CE kunye ne-FDA.
Inkonzo 1.Professional ngexesha yonke odolo, iiyure ezingama-24 kuma imibuzo yakho.
Umgca imveliso 2
Awunasidingo sokuhlela iifektri ezininzi ukufumana iintlobo ezahlukeneyo zeemveliso ozifunayo, emva koko ubuze umntu owahlukileyo kwiinkampani ezahlukeneyo. Unokufumana yonke into apha kwaye unxibelelane nomntu omnye nje ukufumana le nto uyifunayo.
Iinkqubo zokuhlola ezisemgangathweni ezi-3, umlinganiselo we-100% wokuhlolwa ngaphambi kokuthunyelwa.
Ngaphezulu kweminyaka eli-12 yamava kushishino lorhwebo lwamanye amazwe, nikezela ngezimvo zobungcali kuwe hayi kwimveliso kuphela kodwa nakwinkqubo yoku-odola iphela ukusuka ku-A kuye ku-Z, njengemicimbi yamasiko, ukuhambisa ngenqanawa, imiba yerhafu njalo njalo.
1. Umgangatho we-CNC ngomatshini wamalungu okuzinza okuQinisekisiweyo
2. Ukuphuculwa kwebhodi yolawulo kulungelelwaniso oluchanekileyo lwemali
3. Umqhubi wokukhupha amandla womsi kunye nokukhutshwa komsi
4. Izibuko le-USB ukuqhagamshela umkroli
5. I-Windows 8, 7 (i-64 okanye i-32 bit), i-XP, i-2000 iyahambelana (AYIHAMBELELE nenkqubo ye-iOS)
6. I-FDA eqinisekisiweyo
Vumela ngakumbi ukuba kwenziwe eTshayina okwaziwayo kwihlabathi.
Yenza amaqabane ethu enze ishishini lula.